Otu Ahịrị gafere Roller Slewing Bearing Factory - China Single Ahịrị gafere Roller Slewing Bearing Ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya.
Ụlọ ọrụ China na-ebunye Slewing bearing maka ebe ịgbado ọkụ
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.bụ ọkachamara emeputa nkeegbu egbu bearings, na-ejikọta imewe, nrụpụta, na nyocha na mmepe.
nnukwu dayameta anọ kọntaktị bọl turntable bear maka robot
1.Single Ahịrị anọ Point Kọntaktị Ball slewing Bearings.
2.Single Ahịrị gafere Roller Slewing Bearings
3.Ugboro abụọ ahịrị bọọlụ egbu egbu
5.Tin Section Slewing bearings(Light ụdị).
6.Thin Nkebi na-egbu egbu (ụdị Flange)
113 usoro igbu mgbanaka na ime eze na-eji maka elu nkenke igwe
Ị chọrọ n'ịgba turntable bearing dị elu?
Biko kpọtụrụ anyị ka ị nweta ọnụahịa kacha mma!
Otu ahịrị cross roller slewing mgbanaka nwere mpụta gia 111 usoro swing bear
Uru ndị dị n'otu ahịrị cross-roller slewing bearings bụ:
Nkesa ike nhazi bụ ihe pụrụ iche, na ikike iguzogide nrụrụ dị oke mma.
Ndokwa ahụ ziri ezi siri ike karị, yana njehie nkwụghachi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu.
Ọkwa nkà na ụzụ na ọkwa nrụpụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Usoro uru dị ka ntụgharị ntụgharị dị elu, nguzogide siri ike na nrụrụ, nnukwu ibu ikike na nhazi nhazi nhazi.
Otu ahịrị obe rola ụdị Slewing Bearing maka anwụ Tracker na-enweghị gear 110.25.500
Otu ahịrị cross roller slewing bearing, mejupụtara abụọ oche, kọmpat Ọdịdị, ìhè arọ, elu izi ezi nke mmepụta, mgbakọ, obere oghere nke echichi ziri ezi chọrọ dị elu, na ala nke 1: 1 cross ndokwa, nwere ike idi axial ike na Ntughari oge na nnukwu ike radial, a na-ejikarị ebuli njem, igwe injinia na ngwaahịa ndị agha.
A na-akpọkwa mgbanaka mgbanaka rotary bearing, ụfọdụ ndị na-akpọkwa ya: nkwado rotary, nkwado cyclotron. Aha ndị a na-egbu egbu, Slewing Ring bearing, turntable bearing na Slewing Ring. A na-eji nkwado slewing eme ihe na ụlọ ọrụ n'ezie ma kpọọ ya dị ka "njikọ. nke igwe".Ọ bụ ihe dị mkpa nnyefe akụrụngwa dị mkpa maka igwe nke kwesịrị ime ka ikwu rotary ngagharị n'etiti ihe abụọ na-agba axial ike, radial ike na tilting oge n'otu oge ahụ. With ngwa ngwa mmepe nke igwe ụlọ ọrụ, slewing support e ọtụtụ-eji na Akụrụngwa mmiri, igwe ihe owuwu, igwe nrụpụta ọkụ, igwe ọla, igwe ahụike, igwe nrụpụta na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
XZWD otu ahịrị bọọlụ nwere mgbanaka mgbanaka egbu egbu
A na-eji ngwaahịa a eme ihe n'ọtụtụ ebe na igwe injinia, igwe ụlọ, igwe igwe na igwe na-egwuputa ihe, igwe ọdụ ụgbọ mmiri, igwe nchekwa gburugburu ebe obibi, igwe ụlọ ọrụ ọkụ, igwe kemịkalụ mmanụ ala, ụgbọ injinia, akụrụngwa ụlọ ọrụ agha na ihe ndị ọzọ.Mgbanaka mgbanaka nwere ike iburu ibu axial, radial na ibu oge na-atụgharị n'otu oge.Enwere ike ijikọ ya na pinion, mbara ala gearbox na moto…
XZWD 011.60.2800 Mpụga Mpụga Otu Ahịrị bọọlụ na-egbu mgbanaka maka kreenu
Ndị otu Wanda na-agba mbọ idebe mmụọ nke nkwalite na-aga n'ihu ma lekwasị anya na atụmatụ anyị nke ụkpụrụ njikwa njikwa dị mma, nzaghachi ngwa ngwa, nnyefe ngwa ngwa na ọnụahịa dị ala. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na ihe ndị ahịa anyị niile na-eto eto.Ikike anyị na-ebuli ihe nrụpụta ihe maka mkpa gị kpọmkwem bụ ihe na-enweghị atụ na anyị ga-enyere gị aka n'oge nhazi, mmepụta na usoro mmejuputa.
Anyị slewing mgbanaka dayameta nso nke slewing bearing nwere ike si 200 mm ka 5000 mm . Maka slewing mbanye, e nwere itoolu (9) size dị iche iche dị site 3 ″ na 25 ″ nwere ihe karịrị 60 ụdị.
XZWD otu ahịrị bọọlụ na-ebu ntụgharị maka kreenụ ụlọ elu
Anyị na-elekwasị anya na-achịkwa ọ bụla mmepụta nkọwa, Naanị maka nnyefe nke ezi ngwaahịa ndị ahịa.
Ihe eji egbu egbu bụ nchara nchara dị elu, dị ka 42CrMo, 50Mn.
Ngwa a na-atụgharị ahụ bụ GCr15 ma a na-azụ ya n'aka ndị na-ebubata ụlọ nwere ezigbo mma.
Ngwaahịa dị gụnyere: Bọọlụ Ahịrị otu na okpukpu abụọ, Roller Row Atọ, Cross Roller Sealed and Unsealed Internal Geared, Mpụga nke Mpụga na enweghị Geared ma ọ bụ ebugo ya.
XZWD |Mpụga gia Precision Gafere Roller Slewing Bearing
A na-eji otu ahịrị gafere n'ọtụtụ ngwa:
2.Construction ígwè ọrụ
XZWD 4 point angular kọntaktị bọọlụ turntable egbu egbu
Mgbanaka mgbanaka nwere ike iburu ibu axial, radial na ibu oge na-atụgharị n'otu oge.Enwere ike ijikọ ya na pinion, mbara ala gearbox na moto…
Anyị nwere usoro mmepụta siri ike iji mesie oge nnyefe, usoro mmepụta ihe dị ka n'okpuru:
ahaziri OEM Roller Slewing Bearing ejiri maka ebuli njem |XZWD
1. Ejiri mgbanaka oche abụọ mejupụtara
2. Kọmpat Ọdịdị na ìhè arọ
3. Elu nkenke, obere nkwụsị
4. Nwere ike iburu ike axial, oge na-akpata na ike radial buru ibu
XZWD Roller Precision Slewing Bearing Gear mpụga
A na-edobere nghazi rola na ụzọ ịgba ọsọ na ogo 45 na axis.
The static loading ike maka ndị a aghụghọ n'ihe metụtara rola elu kọntaktị ebe dị elu ma megide anọ na asatọ n'ókè kọntaktị bearings, Ọzọkwa;
siri ike dị na nhazi a na-enye ohere maka ọsọ ọsọ na-agbagharị agbagharị ma ga-enye ohere ka ọ bụrụ ihe na-ezighị ezi na ntinye.
Otú ọ dị, njedebe radial erughị eru nke anọ na asatọ n'ichepụta kọntaktị.